I-BDI King Room, iCimarron Suite - I-Airbnb
I-BDI King Room, iCimarron Suite
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguColin
UColin ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-92% yeendwendwe zakutshanje.
I-92% yeendwendwe zakutshanje inike uColin iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu engatshayiyo. Le ndlu yeyelinye lamagumbi ethu okulala amakhulu. Siseziimayile eziyi-34 kuphela ukusuka eAngel Fire nakwiimayile eziyi-40 ukusuka kwiindawo zeRed River Ski. Ukutyibiliza kwikhephu ngokuqinileyo uze uphumle kakuhle kwiibhedi zethu ezintsha ezinamashiti omqhaphu waseYiputa. Qalisa usuku lwakho ngokufumana isidlo sethu sakusasa esishushu!
Ixabiso liquka isidlo sakusasa nazo zonke iirhafu. Igumbi lakho liya kuba neendlela zedijithali zasekuhlaleni, i-Netflix, kunye ne-satellite ekhawulezayo.
IBlue Dragonfly Inn isembindini we-1500 ’ square foot pool kunye negumbi lokujima elinechibi elinzulu eliyi-36' x 16 'x 9', ibhafu enamanzi ashushu, kunye nezixhobo zokujima ezintle kakhulu ezifumaneka unyaka wonke. Sineendawo ezinkulu nezitofotofo ezisetyenziswa ngumntu wonke ezineTV, imidlalo yebhodi, kunye nelayibrari yeencwadi ezinika umdla zasekuhlaleni kunye nazo zonke iintlobo zeencwadi neencwadi. Kukho iveranda enkulu ejonge i-arroyo apho iinyoka zeCimarron River zidlula ezantsi kwendlu ekulungeleyo ukubona izilwanyana zasendle. Iphuli/igumbi lokusebenzela liyafumaneka imini yonke nangokuhlwa. Kukho umkhondo weemayile eziyi-1/4 wokuhamba ujikeleze umda wendlu.
Iindawo ezinomtsalane ziquka: I-Angel Fire Ski Area, i-Red River Ski Area, i-Taos Ski Area, i-Philmont Scout Ranch, i-Cimarron Canyon State Park, i-Valle Vidal Unit of Carson National Forest, i-E Eagle Nest Lake, i-Maxwell National Wildlife Refugees, i-NRA Whittington Centre, i-Taos Pueblo, kunye neefama zendawo.
Senza isidlo sakusasa esishushu esenziwe phantsi yonke imihla kwaye sidla ngokutya neendwendwe zethu ngaphandle kokuba kucelwe ngenye indlela. Iindwendwe zisenokufumana isidlo sakusasa kwindawo ephangaleleyo kwigumbi lazo. Siyakuthanda ukudibana nabantu abatsha kwaye siza kukunika amacebiso amaninzi ngeendawo onokuya kuzo, izinto onokuzibona, nendawo yokutyela ngoxa ukwindawo yakho.
Senza isidlo sakusasa esishushu esenziwe phantsi yonke imihla kwaye sidla ngokutya neendwendwe zethu ngaphandle kokuba kucelwe ngenye indlela. Iindwendwe zisenokufumana isidlo saku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cimarron